Tambira ne crypto kunyangwe musika unodonha!
Semutengi weStormGain, iwe unogona kutora chikamu mune yakasanganiswa kuvimbika chirongwa:
– Kusvika pa 20% bhonasi pane chero dhipoziti
– Kusvika pa 10% kufarira pane ese ako cryptos akachengetwa muStormGain wallets
– Kusvika pa 20% kuderedzwa pakutengesa uye kuchinjanisa makomisheni
Kuti udzidze zvakawanda, ingoshanya iyo peji yekuvimbika chirongwa.
Yese-in-one crypto chikuva StormGain.com yatova imwe yemapuratifomu akanaka kwazvo 2020
StormGain ipuratifomu yakagadzirirwa kuita kuti zvive nyore kutengeserana kana kutsinhana kwemakristani uye kuita kuti iwanikwe uye nyore kunzwisisika kune wese. Munguva ino pfupi yenguva, chikuva chakabudirira kubatanidza zvishandiso zvinobatsira zvevatengesi, mabasa ekutenga uye kubhadhara kwe cryptos kuwedzera kune yayo yekushandisa-inoshamwaridzana. Izvi zvinoita kuti StormGain ive yakanyatsogadzika chikuva kune vese vanotanga uye nyanzvi.
StormGain yakavewo inozivikanwa seyiyi crypto platform ye 2020 kubudikidza “The European”, magazini inoremekedzwa kwazvo. Iyo magazini inoshevedza StormGain imwe yemhando dzakanakisa dzevanotsvaga kuti vapinde munyika yemari dzemari, uye zvine musoro. StormGain parizvino yapfuura 120,000 vatengi mune inopfuura 100 nyika uye mushandisi yekushandisa inowanikwa mukati 23 mitauro kuitira kuti vashandisi vanobva kumativi ese epasi vagone kupinda pachikuva uye kushanda mumitauro yavo mukati mekushandisa.
Chekutanga, ngatitsanangure zvimwe zvezvinhu zveStormGain. Sezvo iri chikuva chine kukurumidza kunyoresa, iwe uchave wakagadzirira kuenda mukati isingasviki maminitsi mashoma mushure mekunyanya-pfupi yekuvandudza maitiro. Zvese zvaunoda iemail yako, nhamba yako yefoni uye password.
Kwayedza njodzi isina-kutengeserana neUSA 50,000 demo account, iyo inokubvumira kuti uedze zvishandiso uye zvigadzirwa zvinopihwa neiyo yeplatifomu usati watengesa muaka yako account, kana ita dhipoziti uye tanga kushandisa yako live account izvozvi.
Buying crypto currency is also easy on this platform, sezvo iwe uchigona kuita zvese izvi nekadhi rako rebhangi (chikwereti kana kadhi rechikwereti). Izvi zvinokupa iwe kupinda kune yakakosha crypto mari mumusika. Izvi zvinosanganisira Bitcoin (BTC), Ethereum (paEti), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (bch) and many others that are available to trade or to hold. StormGain yakazivisawo mubatanidzwa mutsva nekambani yeLondon-based Koinal, mukuedza kupa vashandisi vayo zvimwe zvingasarudzika uye nyore kushandisa. Iyi kambani inotsigirawo sarudzo yekutenga crypto mari. Koinal inoita kuti itenge kutengwa kwemakristchuru akadai seBitcoin, Ethereum, Litecoin uye Ripple.
Ipo zviri nyore kwazvo kutenga crypto, StormGain parizvino yakashandisa sarudzo yekubvisa crypto senge fiat yemari nekuendeswa kwebhangi kuitira kuti iwe ugone kukurira zvibodzwa zvako nekukurumidza.. Zvimwe zvakanakira zvinopihwa netava iyi nevashandisi uye zvatinga simbisa ndezvemagetsi, i.e. access to all of the instruments on offer is available around the clock, uye hapana makomisheni akavanzwa kana 0% chinja neawa. StormGain inopawo imwe yezvishandiso zvakakosha kune wese mutengesi: free kutengeserana masaini. Izvi ndezuva nezuva zviziviso zvinoita kuti iwe ugare uine ruzivo nezvechangobva kuitika yemusika uye chengetedza vatengesi kusvika parizvino kuitira kuti vagone kuita sarudzo dzakanakisa pavanenge vachienderera.
Mukuedza kupa kwakanyanya kubatsirwa kubatsirwa uye kubatsirwa, chikuva zvakare chinopa emahara vhidhiyo zvidzidzo pamharidzo ye crypto kune wese munhu, kupa kunzwisisa kwakanaka kwekuti nyika ye crypto inoshanda sei uye nzwisiso iri nani yezvainoita Inotendera vashandisi kuve nyanzvi mumavhiki mashoma.
StormGain inopawo mukana wekutengeserana nehuwandu hwekuwedzera kusvika ku200x, saka unogona kutengeserana nehuwandu hwepamusoro kupfuura iwe zvaungaita neimwe nzira, iyo inokutendera iwe kuti uwedzere purofiti yako. Mira-kurasikirwa uye tora-purogiramu yekutengesa zvishandiso zvinopihwa zvakare kuti zvikubatsire iwe nekushanda kwega kwega uye nekudzora mheto yekukanganisa nezvisarudzo zvese, iyo inonyanya kukosha pakutengesa crypto.
Kuchengetedza ndechimwe chinhu chakakosha cheStormGain, nekuti kuwedzera kune 6 crypto wallets, mauri iwe unogona kuchengetedza zvakajairika cryptocurrencies, iwe zvakare une inotonhora wallet kuti uchengete mari yako. StormGain inogara ichipa vashandisi zviyero zvepamusoro uye chengetedzo protocol, saka iwe unogona kuchengetedza marata ako akachengeteka neiyo 2-factoridhi yekusimbisa system uye zvese zvekuchengetedza kuchengetedzwa kwepuratifomu, saka unogara wakagadzirira kuenda.
Zvese zviridzwa izvi zvinobatsira kwazvo mune iripo yemusika mamiriro. Iko kusagadzikana kwehupfumi uye kusagadzikana kwemisika kunoita kuti crypto kutengesa mukana wakakura uye unoita kuti vatengesi vakwanise kuwana purofiti kubva panguva ino. Izvo zvakakosha kuti utore zvimwe zvinhu mu account, senge dzezvokutengeserana mubhadharo uye mabhenefiti aunogona kuwana kubva kune akasiyana mapurogiramu epuratifomu aya aunofanira kupa.
Tsigiro yevatengi; StormGain inopa chimwe chinhu icho mashoma crypto mapuratifomu ane, pane 24/7 rarama rutsigiro kuburikidza nekurarama kutaura, email, nhare uye runhare. Izvi zvinogonesa kutaurirana zvakananga nenyanzvi dzechikuva, vanobatsira kugadzirisa matambudziko uye kujekesa ambiguities mukutengesa. Ichi chinhu chakakosha zvakanyanya paunosarudza cheplatifomu ye crypto, sezvo asiri ese mapuratifomu ane basa iri, izvo zvinobatsira kwazvo kune vatengesi.
With StormGain you will no doubt be able to trade or to hold cryptos in a simple and convenient way. Iko pasina mubvunzo kuchave nemabasa ekuwedzera uye zvishandiso mune ramangwana izvo zvichabatsira vatengesi kuzadzisa zvinangwa zvavo. Iwe unogona kutosvika pakuyambuka-chishandiso chikuva chero nguva uye chero kubva pafoni yako yekufambisa, piritsi kana PC. Unogona kuwana app pane Google Play uye Apple Store or by going to www.stormgain.com and filling out the registration form to gain access to the web platform.